मनिष वसिष्ठको सर्ट फिल्म ‘काल मेरो साथी’ चाँडै नै आउने तयारीमा - Everest Dainik - News from Nepal
मनिष वसिष्ठको सर्ट फिल्म ‘काल मेरो साथी’ चाँडै नै आउने तयारीमा
२०७५, १३ कार्तिक मंगलवार
पछिल्लो समय फरक किसिमको गीत–संगीत रचना र त्यसको भिडियोलाई निर्माण गर्दै आइरहेका गीतकार मनिष वसिष्ठले सर्ट फिल्म ‘काल मेरो साथी’ लिएर आएका छन् ।
पछिल्लो समय पखेटा र मुखौटा जस्ता फरक शैलीको गीतपछि उनले यो सर्ट फिल्म लिएर आएका हुन् ।
यसमा रंगकर्मी जीवन भट्टराई र दिपेन्द्र शाहीको अभिनय रहेको छ । स्टोरी कन्सेप्टअनुसार नै यी दुई भिडियोमा प्रस्तुत भएका छन् । यसको लेखनमा मनिषलाई रंगकर्मी लक्ष्मी बर्देवाले साथ् दिएकी छिन । यसमा ब्याकग्राउण्ड स्कोर ऋदम कँडेलको रहेको छ भने यसलाई ज्ञानेन्द्र शर्माले छायाँकन गरेका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस लघु हाँस्यव्यंग्य चलचित्र ‘अर्थको अनर्थ’ सार्वजनिक
यसलाई रुपेश खड्काले सम्पादन गरेका हुन् भने यसको निर्देशक निकेश खड्का हुन् ।
म्युजिक भिडियो निर्देशन हुदै फिल्म समेत निर्देशन गरिसकेका निकेशले यसलाई पृथकशैलीमा निर्माण गरेको बताएका छन् । यसमा कालसँगको भेटलाई देखिएको छ । असन्तुष्ट कविले जीवनको उतराद्धमा भएपनि काललाई भेटेर रचना गर्ने कविता र काल प्रतिको मानसिकतालाई भिडियोमा विम्बको रुपमा चित्रण गरिएको छ । निकेश सर्ट फिल्म मार्फत निकै आश्वादी छन् ।
निकेश खड्का स् पछिल्लो समय म्युजिक भिडियो भन्दा केहि फरक गर्ने प्रयास हो, यो सर्ट फिल्म ।
मैले धेरै भिडियोको निर्देशन गरे, तर यो टिमसँग काम गर्दा फरक नै हुँदै गयो । यही टिमसँग मैले मुखौटा, पखेटा लगायतका भिडियो तयार गरिसकेको छु, जुन मेरो अन्यभन्दा फरक छ । यो पनि त्यसैको निरन्तरता हो । हामीले परिस्थितिलाई सिम्बोलिकरुपमा देखाउने कोसिस गरेका छौं । भिडियोले एक किसिमको सोच सिर्जना गर्छ भन्नेमा आशावादी छु ।
मनिष वसिष्ठ यसलाई सुरुवातमा गीत मात्र बनाउने कि भन्ने सोचाइ नआएको होइन तर डेभलप हुदै गएपछि यसले सर्ट फिल्मको रुप लिएको हो । मेरो रचनामा तयार भएका अघिल्ला गीतहरु फरक नै छन्, जसलाई मैले युट्युब एमबी क्रिएसनमार्फत ल्याएको छु । दर्शकबाट आउने प्रतिक्रियाले हामीलाई अगाडि बढ्न अझै हौसला मिल्छ भने मार्गदर्शन पनि पाइन्छ ।
ट्याग्स: short film
प्रचण्ड निवासमा ओलीनिकटका नेताः के भयो छलफल ?
हङकङका ३० लाख बासिन्दालाई नागरिकता दिँदै ब्रिटेन
गण्डकी प्रदेशमा संक्रमित संख्या १ हजार नाघ्यो
बारामा चट्याङ लागेर ४ महिलाको मृत्यु, ७ घाइते
बेलायतमा कोरोना खोप परीक्षणले जगायो आशा
आत्महत्या अघि सुशान्तले के सर्च गरे ? सार्वजनिक भयो फरेन्सिक रिपोर्ट
अमेरिकामा कोरोनाको नयाँ रेकर्ड